गभर्नर डा नेपालद्वारा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको छहारा शाखा समुद्घाटन » Etajakhabar
गभर्नर डा नेपालद्वारा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको छहारा शाखा समुद्घाटन
काठमाडौँ । नेपालको बैंकिंग क्षेत्रमा मा पथक पहिचान बनाउन सफल रहेको सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड ले आफ्नो ६० औं शाखा पाल्पा को छहरामा समुद्घाटन गरेको छ । आज मिति २०७४ साल भाद्र १९ गते नेपाल राष्ट्र बैंक का गभर्नर डा चिरन्जीवी नेपाल को बाहुली बाट उद्घाटन गरी बैंकिंग कारोबार को सुरुवात गरिएको छ । उक्त समारोहमा जिल्ला का उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी, उद्योगी, ब्यापारी, नागरिक समाजका अगुवा हरुको बाक्लो उपस्थिथि रहेको थियो ।
छहारा शाखाको बिधिबत समुद्घाटन संगै सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले ग्राहक महानुभाबहरुलाई देशभरी फैलिएका यस बैंकको ६० वटा शाखा, ५९ वटा ए.टि.एम. काउन्टर र ९७ वटा शाखा रहित आधुनिक बैकिङ्ग सेवाबाट करिब ३ लाख ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।. साथै आफ्नो ग्राहकवर्गलाई रेमिट्यान्स सेवा, ड्राफट, भिसा ए.टि.एम. कार्ड सेवा, भिसा ईन्टरनेशनल डलर कार्ड सेवा, विभिन्न किसिमका निक्षेप तथा कर्जा सविधाहरु तथा कुनै पनि शाखाबाट रकम झिक्न र राख्न सकिने जस्ता सुबिधाहरु पनि उपलब्ध गराउदै आऐको छ ।
उक्त समारोहमा सामाजिक उतरदायीत्व कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकले गभर्नरज्यू को बाहुलीबाट श्री भैरव नवदिप माध्यामिक विद्यालयलाई १ थान कम्प्यूटर र श्री महाकाली माध्यामिक विद्यालयलाई १ थान कम्प्यूटर गरी जम्मा २ थान कम्प्यूटर हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले हरेक सम्भावित बजार क्षेत्रमा आफ्ना ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराउने अभिप्रायले अन्य विभिन्न स्थानमा चाँडै नै थप शाखा संचालन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र १८, २०७४ समय: १५:००:३८
नेपाली खानेतेल उद्योग संकटमा, उद्योग धमाधम बन्द हुँदै
सिमेन्ट–डन्डीमा चरम ठगी , एक महिनामै १७ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि
रेलको चर्चा धेरै ! रेल इन्जिनियर नभएको देशमा कसरी आउँछ रेल ?
उकालो लाग्यो सुनको मूल्य,थाहा पाउनुहोस आजको भाउ
राप्रपालाई लात हानेर एमालेतिर लागेकी गायिका कोमल ओली सफल होलीन् एमालेको राजनीतिबाट ?
प्रहरी कार्यालय मै थुनुवाले पाए स्वास्थ्य परीक्षणको शिविर
राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार छान्न शीर्ष दलहरु ब्यस्त, आज हुँदैछन् यस्ता महत्वपूर्ण निर्णय
भूत घर बन्यो आरजुको बंगला
डेटिगंकै समयमा प्रेमीका मेगानलाई गर्भवती बनाएपछि बेलायती राजकुमार ह्यारीले हतारमा इन्गेजमेन्ट गरेको खुलासा, बिहे नगर्दै बन्लान् त बाबु ?